‘बोर्डरलाइन’ मा लुकेको वामदेवको स्वार्थ : कति सम्भव छ नेकपामा फेरि एकता ? - मधेश प्रदेश डटकम
‘बोर्डरलाइन’ मा लुकेको वामदेवको स्वार्थ : कति सम्भव छ नेकपामा फेरि एकता ?
January 8, 2021 | 56 पटक हेरीएकाे
पुस ५ को संसद् भंग गर्ने सरकारको निर्णयपछि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) राजनीतिक रुपमा विभाजन भैसकेको छ । कानुनी रुपमा विभाजनले औपचारिकता नपाएपनि व्यावहारिक रुपमा नेकपाका दुवै पक्ष छुट्छुट्टै, बैठक भेला र कार्यक्रम गर्न व्यस्त छन् । यसक्रममा एकपक्षले अर्को पक्षलाई कारवाही गर्नेदेखि आआफ्नै ढंगले संगठन विस्तारमा लागिरहेका छन् ।
नेकपाको यो विवादमा उपाध्यक्षसमेत रहेका वामदेव गौतम भने अहिलेसम्म कतैपनि खुलिसकेका छैनन् । अर्थात उनी अझैपनि विभाजित नेकपा एकता गर्न सकिन्छ कि भनेर लागिरहेको दावी गर्छन् । संसद् विघटनपछि सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटको फैसला र निर्वाचन आयोगले दिने पार्टी आधिकारिकता पर्खेर बसेका गौतम नेकपा एकता जोगाउनकै लागि भनेर तेस्रो धारका रुपमा सांगठानिक संरचना नै बनाइरहेका छन् ।
‘दुवै पक्षमा गल्ती–कमजोरी देखेको छु । तैपनि फेरि एकता गराउन सकिन्छ कि भनेर लागिरहेको छु । एक्लै एकताको माहोल बनाउन सकिन्न कि भनेर संगठनात्मक संरचना निर्माण गरेर पनि जाने पक्षमा छु’, राष्ट्रिय सभा सदस्य समेत रहेका गौतमले बिहीबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै पार्टी विभाजनमा आफू कतैपनि नलाग्नुको कारण सुनाए । उनले पार्टी एकता अपरिहार्य रहेको पनि बताए ।
‘मलाई लाग्छ, बुझ्न सकियो भने पार्टी एकता अपरिहार्य छ । तर, अवस्था कस्तो छ भने दुवै पक्ष समाजवादी सभ्यता, संस्कृति निर्माण गर्छु भन्नेहरूलाई लाज लाग्ने गरी उत्रनुभएको छ’, उनले भने । तर, गौतम पार्टी एकता केका लागि भन्नेमा भने प्रस्ट छैनन् । जवकी गौतम प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चालेको कदमबारे पनि प्रस्ट छैनन् ।
गौतमको बोली किन फेरियो ?
गौतमले पहिला संसद् विघटन असंवैधानिक भनेका थिए । जव यो विषयमा दलहरु धु्रवीकृत हुँदै गए गौतम आफूलाई मध्यस्तकर्ता भन्दै कुनै पक्षमा पनि उभिएनन् । उनले आफूलाई पार्टी एकताको पक्षमा उभ्याउने प्रयास समेत गरे । तर उनको प्रयासप्रति नेकपाको कुनै पक्षले विश्वास गरेको छैन । सुरुमा संसद विघटनलाई असंवैधानिक भनेका गौतम पछिल्लो समय भने संवैधानकि भन्न थालेका छन् । बिहीबारको राष्ट्रिय सभा बैठककमा बोल्दै गौतमले यो विषय सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा पुगिसेकाले असंवैधानिक भन्न नमिल्ने जिकिर गरेका हुन् । यसबाट गौतमको ढुलमुल प्रस्ट छ । त्यतिमात्रै होइन गौतमले आफ्नी श्रीमती समेत रहेकी तुलसा थापालाई ओली कित्तामा हस्ताक्षर गर्न लगाएका छन्, तर आफू एकता कायम राख्ने भनेर हिँडिरहेका छन् । यो आफैमा विरोधाभाष कुरा हो’ प्रचण्ड माधव पक्षका एक स्थायी समिति सदस्य भन्छन्, ‘गौतमको भूमिकाले पार्टी एकता हुन्छ भन्नेमा कहीँकतै विश्वास गर्ने आधार भेटिँदैनन् ।’
ती सदस्यको भनाइ छ, ‘ओली जसले असंवैधानिक कदम चालेका छन् उनलाई फेरि पार्टी एकताका नाममा अध्यक्ष वा कुनै महत्त्वपूर्ण पद दिनुपर्छ भनेर हिँड्ने गौतको कुनै स्वार्थ हुुनु बेग्लै कुरा हो । यदि गौतमले भनेजस्तो फेरि नेकपा एकता भएमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई यसले अरु क्षतविक्षत बनाउने काम बाहेक केही गर्दैन ।’
वामदेव गौतमसँग लामो संगत गरेका र केही समयअघिसम्म गौतम निकट भनेर चिनिने नेकपाका केन्द्रीय सदस्य बलराम बाँस्कोटा गौतमको पछिल्लो प्रयास सफल नहुने देखेर नै आफू प्रचण्ड माधव पक्षमा लागेको बताउँछन् ।
वामदेवको बोर्डरलाईनबारे यसो भन्छन् बाँस्कोटा
पहिलो कुरा पार्टी एकताको पक्षधर माथिका नेताहरु भन्दा पनि आम कार्यकर्ताहरु नै हुन् । कार्यकर्ताको चाहानामाथि कुठाराघात गर्दै केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक क्रियाकलापबाट संसद् विघटन गर्नुभयो यसले ओली देश, जनता र नेकपाका कार्यकर्ताको चाहनाविपरित जानुभयो भन्ने देखाउँछ । जुन विषयको निर्णय ओलीले कसैको योजनामा गरेको हो भन्ने प्रस्टै छ । किनभने संविधान जारी भइसकेपछि बनेको संसद आम जनताको आँखाको नानी र प्रतिकृयावादीहरुका लागि आँखाको कसिंगरका रुपमा रहेको थियो ।
जसलाई ओलीले भंग गरेर संसारका न्याप्रेमी जनताको विश्वासमाथि कुठराघात गर्नुभयो । यस अर्थमा यो कदम संविधानको मर्मविपरित हो भनेर भनिएको हो । ओलीको स्वार्थ संसद विघटनमा मात्रै सिमित रहला भन्न सकिँदैन, किनभने ओली नेपालमा उम्रेको र फक्रदै गरेको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई योजनावद्ध बिर्सजन र विखण्डन गर्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ ।
त्यसकारण उहाँ (केपी ओलीले ) प्रतिक्रान्तिलाई सघाउनुभएकाले उहाँका गतिविधिहरु राष्ट्रवादी जनताले एक्सपोज गर्नुपर्ने पहिलो आवश्यकता छ । त्यो गरेपछि मात्रै पार्टी एकता दरिलो हुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । दोस्रो कुरा के वामदेवको अहिलेको भूमिकाले पार्टी एकता सम्भव छ त ? मैैले वामदेव गौतमसँग लामो समय करिव २५ वर्ष संगत गरेँ । त्यसक्रममा मैले उहाँको सिद्धान्त र दर्शनप्रतिको इमान्दारितामा प्रश्न गर्न मिल्दैन । तर मेरो अनुभवमा उहाँ अस्थिर प्रवृतिको मानिस हो । आफ््नै निर्णयमा पनि अडिग नरहेर फर्किने उहाँको बानी छ । उहाँको पछिल्लो गतिविधि हेर्दा पनि गौतम पहिला केपी ओलीको प्रतिक्रान्तिकारी गतिविधिमा सहभागी हुनुभयो । जव केपी ओलीलाई अलि अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था आयोअनि उहाँका खुट्टा पनि लक्पकाएका देखिन्छन् । यदि गौतम दृढतापूर्वक उभिनुभएको थियो भने ओलीले चाल्ने यो कदमअघि नै उनी कारवाहीमा पर्नेथिए र उनीविरुद्धको लडाइँ अरु सशक्त भैसकेको हुने थियो । अहिले ट्रेन अघि बढिसक्यो तर प्यासेन्जर कुराउने बाटोमा उहाँ लाग्नुभएको छ । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यस्ता गतिविधिहरु धेरै भएका छन् । विभाजन पनि भएका छन्, एकता पनि भएका छन् ।
यसअघि नेकपा एकता केन्द्र विभाजित हुने बेलामा अल्पमतलाई कारवाही गर्नुपर्यो भनिएका बेलामा ५ जना सचिवालय सदस्यमध्ये बाबुराम भट्टराई, पम्फा भुषाल, लिलामणि पोखरेल, निनु चापागाईँ र म थियौँ । त्यसबेला निनु चापागाईँ र लिलामणि कारवाहीको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो भने बाबुराम र पम्फा भुषाल विपक्षमा हुनुहुन्थ्यो त्यसमा मैले अल्पमतमा रहेकाहरुमाथि कारवाहीको आवश्यकता छैन भनेर मैले भनेँ । साँच्चै हामी सशस्त्र क्रान्ति गर्ने हो भने सुरु गरौ त्यसक्रममा उहाँहरु अवरोधक हुनुभयो भने त्यसबेला कारवाही गरौ भनेर मैले प्रस्ताव गरे । जसका कारण कारवाही प्रक्रिया अघि बढेन र नरबहादुर कर्माचार्यको संयोजकत्वमा एउटा कमिटि गठन भयो र लास्टमा सिन्धुनाथ प्याकुरेल र म मात्रै अन्तिमसम्म एक ठाउमा रह्यौ ।
पछाडि नेकपा एमाले विभाजन भयो यो त धेरैलाई थाहा छ । त्यसबेला नेता राजेन्द्र पाण्डेले एकताका लागि पहल गर्नेमा हुनुहुन्थ्यो । उहाँ त्यसवेला एउटा साइडमा लाग्नुभयो । त्यसरी एकताका लागि पहल गर्नेहरु कुनै एउटा समूहको
चाहनामा काम गरिरहेका हुन्छन् भन्ने बुझियो । नरबहादुर कर्माचार्य र राजेन्द्र पाण्डे दुवैका गतिविधिले त्यो कुरा प्रमाणित गरेको छ । अहिले बावदेवमाथि त्यो आक्षेप त म लगाउन चाहान्नँ तर यसले कुनै एउटा स्वार्थ समूहलाई फाइदा हुने काम भयो भने उहाँको राजनीतिक इतिहासमाथि प्रश्न उठ्छ । त्यसकारण गौतमले लिएको अहिलेको बाटोबाट निकास आउनसक्छ, पार्टी एकता हुनसक्छ भन्ने लागेको भए म उहाँकै कित्तामा हुने थिएँ ।
मेरो ४५ वर्षको कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास, क्रियाशीलता र अनुभवले उहाँको लाइन सफल नहुने देखेरै मैले आफ्नो कित्ता क्लियर गरेर प्रचण्ड–माधव पक्षमा लागेको हुँ ।
भ्रष्टाचार गर्ने मेयरलाई स्थानीयले रुखमा...
एजेन्सी । मेक्सिकोको दक्षिणी भागमा रहेको चियापास राज्यको एक नगरका मेयरलाई आक्रोशित नगरवासीहरूले रुखमा बाँधेका छन् । नयाँ पानीटंकीको अवस्था टीठलाग्दो...
भारतले नेपालसहित मित्र देशहरुलाई २...
ऋषि धमला, नयाँ दिल्ली । भारतले नेपालसहित मित्र देशहरुलाई कोरोना भाइरसविरुद्धको भ्याक्सिन दिने भएको छ । उसले भ्याक्सिनको प्राथमिकतामा नेपाललाई...
२ माघ: इन्डोनेसियाको सुलावेसी द्वीपमा शुक्रबार बिहान ६.२ म्याग्नीच्युडको शक्तिशाली भूकम्प गएको छ । यस भूकम्पमा परी कम्तीमा ३४ व्यक्तिको...
श्रीलंकाका पूर्व मन्त्रीलाई चार वर्ष...
एजेन्सी, २ माघ । श्रीलंकाली प्रतिपक्षी दलका नेता तथा प्रर्व मन्त्रीलाई सर्वोच्च अदालतले चार वर्ष कैदको फैसला सुनाएको छ ।...
जेन्सी, २ माघ । उत्तर कोरियाले सैन्य परेडमा नयाँ घातक पनडुब्बी क्षेप्यास्त्र सार्वजनिक गरेको छ । अमेरिकी नव–निर्वाचित राष्ट्रपति जो...
अमेरिकाबाट उडेर आएको परेवालाई अष्ट्रलियन...
एजेन्सी, २ माघ । अष्ट्रेलियाले आफ्नो देशमा नयाँ वस्तु तथा सामाग्रीलाई अनुमति बेगर भित्रन दिदैन । यतिसम्मकी विमानस्थलमा अर्को देशको...
भ्रष्टाचार अभियोगमा कोरियाकी पूर्वराष्ट्रपति हेलाई...
दक्षिण कोरियाकी पूर्वराष्ट्रपति पार्क ग्युन हेलाई उच्च अदालतले २० वर्षका लागि कैदको फैसला सुनाएको छ । बिहीबार उच्च अदालतले तल्लो...
भारतमा उत्पादित कोभिसिल्डलाई नेपालमा अनुमति,...
काठमाडौं, २ माघ । नेपालमा भारतको सेरम इन्स्टिच्युटले उत्पादन गरिरहेको कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप आउने निश्चितप्रायः भएको छ । औषधी व्यवस्था...